Indida kulunywa izingane eziyi-10 esibhedlela | IOL
Izingane iningi lazo ezingeniswe ngoba zishile zinezinyanga eziyisishiyagalombili kuya kwezingu-18. Zilunywe izindebe ezingezansi, ezinye zinokuklwebheka emzimbeni nasezandleni.Abazali bezingane izolo baficwe yiSolezwe behlezi emabhentshini befuna ukukhuluma nesikhulu sesibhedlela kodwa onesi belokhu bethi sisemhlanganweni.
Onesi uma bebuzwa ukuthi izingane zilunywe yini bebechitha izandla bethi kabazi.
Omunye wabazali ongathandanga ukudalulwa igama ngoba esaba ukuthi angase angasizwa, utshele Isolezwe ukuthi ingane yakhe enonyaka uyifice isilunyiwe ebuya kochama.
“Ngiye ngaphuma ngiyochama ebusuku, kuthe sengibuya ngafica ingane ikhala. Uma ngiyihlola ngathola ukuthi udebe lwayo luyopha, iklwejiwe emzimbeni nasezandleni.
“Uma ngibuza konesi ukuthi kwenzenjani akekho obe nempendulo. Iyangisabisa le nto ngoba ikhombisa ngokusobala ukuthi akuphephile esibhedlela uma izingane zilunywa yinto engaziwa,” kusho umzali.
Omunye othi akasalali esibhedlela nengane yakhe utshele Isolezwe ukuthi ngesikhathi efica ingane ilunywe udebe onesi bamtshele ukuthi basola ukuthi ishayeke embhedeni.
“Bekuyisonto elidlule ngesikhathi ngitshelwa ukuthi ingane ishayiseke embhedeni kodwa omunye umzali wabona ingane eneminyaka ewu-10, nayo elaliswa lana nezingane zethu, iganga ifaka okusansipho ekudleni kwezingane wayiceba.
“Sisola ukuthi iyona le ngane endala eluma izingane zethu ngoba zilala emibhedeni evalwayo. Asazi yini engaziluma noma mhlawumbe kunamagundwane?” kubuza lo mzali.
Izingane ezilimele izindebe zingaphezu kuka-10 kanti zonke zisaphathwa njengoba ezinye zisafunda ukucathula.
“Okusiphatha kabi ngokulimala kwezingane zethu wukuthi akekho ositshelayo ukuthi zilunywe yini.
“Zivele zajovwa ngomjovo esingawazi. Azithathwanga igazi ukubheka ukuthi le nto ezilumile inani.
“Uma sicela ukuthi basinikeze zona okungcono sizilethe ngezinsuku ezithile abafuni, kunalokho udokotela ufuna ukusisayinisa ifomu elithi siyenqaba ukuthi zilashwe.
“Asinqabi ukuthi zilashwe izingane kodwa sikhathazekile ngokuphepha kwazo njengoba zivuka zilunywe izindebe ziklwejwe nomzimba.
“Siyacela uNgqongqoshe uDhlomo angenelele. Asazi sizokhuluma nobani ngoba isikhulu sesibhedlela asizimisele ukubonana nathi,” kusho omunye umzali.
Ingane esolwa ngokuthi iyona ebihlasela ezinye ibingasekho ngesikhathi Isolezwe lifika. Omunye wonesi obekhuluma nabazali uthe isisusiwe ngoba vele ibilinde osonhlalakahle.
Imizamo yokuthola aboMnyango wezeMpilo ukuthi baphawule ngalolu daba ibhuntshile. Size sayoshicilela bengaphenduli.SHOW ALLIsolezweUthisha ungene umfundi ngezinyo 'emthandazela'U-AKA usongele uBlack CoffeeInjabulo uBhaka wodumo embesaHeady goea hereBashaye umuzi wekhanselaMost ReadBayameseka abazali uBabes WodumoKuthiwa akaganwe umfundisi wodumoUbuyela kuPSL uDikgacoiUNgqongqoshe uchitha izinsolo ze-IFPAbanye abafundi abakhala ngokucwaswa ngokwebalaAdvertisementMOREisolezweMenu Izindaba|Ezokungcebeleka|Ezemidlalo|Intandokazi|Ezemisakazo|Ezezimoto|Classifieds|isolezweMenu Izindaba|Ezokungcebeleka|Ezemidlalo|Intandokazi|Ezemisakazo|Ezezimoto|Classifieds|INFOAbout IOLFront pageMarket indicatorsMovie guideNewspapersTV guideWeatherSITESBabyNet.co.zaGlamour.co.zaGQ.co.zaIlisolezweIsolezweIOL JobsIOL PropertyIOL SportzoneLoot.co.zaClassifiedsWomanOnlineSECTIONSNewsBusinessSportMotoringTonightLifestyleTravelScitechCape communityAbout IOLFront pageMarket indicatorsMovie guideNewspapersTV guideWeather